मर्म जीवनको....कर्म निधारको....: बुद्धिशिरोमणि द्रव्यनाथ:- खगेन्द्र संग्रौला
बुद्धिशिरोमणि द्रव्यनाथ:- खगेन्द्र संग्रौला
आक्कल-झुक्कलबाहेक बुद्धिशिरोमणि द्रव्यनाथ गम्भीर पुस्तक पढ्दैन। ऊ ठान्छ- नीलो आकाशमुनिका ज्ञानगुनका सारा कुरा उसलाई कण्ठस्थ छ। र, नै त उसलाई कसैबाट ज्ञान लिनु छैन, अज्ञानी लोकलाई ज्ञान दिनुमात्र छ। उसले 'शंकर लामिछाने शंकर लामिछानेका दृष्टिमा' पढेको छैन। पढेको भए शायद ऊ आफ्नो वास्तविक आकारमा धर्ती टेकेर उभिँदो हो र उसको स्वआंकलन अलि यथार्थपरक हुँदो हो। तर कुरो उल्टो छ। ऊ शंकर लामिछानेको ठिक्कको स्वरुपबाट होइन, गीताका कृष्णजीको विराट् स्वरुपबाट प्रभावित छ। त्यसैले त ऊ आफ्नो विराट् स्वरुपको निर्माणमा कन्दनी कसेर लागिपरेको छ।
द्रव्यनाथका दुईवटा मन्त्र छन्- लोकतन्त्र र मानव अधिकार। ऊ यी दुई मन्त्र जपिरहन्छ- विपनामा पनि, सपनामा पनि। यी मन्त्रका लागि परिआए ऊ जीवन आहुति दिन पनि तत्पर छ। हाल द्रव्यनाथका दृष्टिमा लोकतन्त्र र मानव अधिकारमाथि खग्रास ग्रहण लागेको छ। ग्रहणकारी तŒव हो, सिंहदरबारमा राज गर्ने र बालुवाटारमा बास बस्ने 'रगतले हात रङ्गिएको' लाल मनुवा। द्रव्यनाथ ठान्छ- यो लाल मनुवा स्तालिन, पोलपोट, किम जोङ र फिडेल कास्ट्रोको संयुक्त औतार हो। अहो † एक चोलामा भयावह अनेकको कति सर्वनाशी औतार † सिंहदरबारको राजकाज र बालुवाटारको बासमा त गौमाताको दूधले नुहाएको, सात्विक मेवामिष्टान्न खाएको, जातको उच्च र चित्तको चोखो कुनै तागाधारी देवात्मा पो हुनुपर्ने हो। तर छ त्यस्तो आततायी दानव † अनि लोकतन्त्र र मानव अधिकारको दिव्य चेतनाले ओतप्रोत भएको द्रव्यनाथको आत्मा औडाहाले किन नजलोस्?
कोमल आत्माको असह्य ज्वलनलाई समन गर्न हिजो राति द्रव्यनाथ एक क्वाटर एन्टिक्विटी ब्लु सेवन गरेर घुप्लुक्क सुतेको थियो। ब्लु माने नीलो। द्रव्यनाथको विचारमा नीलो भनेको लाललाई तह लगाउने अचुक अस्त्र हो। त्यसैले त एन्टिक्विटी ब्लुप्रति उसमा अगाध अनुराग छ। द्रव्यनाथलाई रातभरि त ब्लुले राम्रै गर्यो । तर बिहान उठ्दा उसको कुलीन देहमा ब्लुको प्रभाव चेट् भइसकेको थियो। र, उसको आत्मा औडाहाले हनहनी जलिरहेको थियो।
द्रव्यनाथ मिल्क कफीको कप बोकेर आफ्नो विशाल हबेलीको छतमा उक्ल्यो। कफीको स्वादिष्ट घुट्को र चुरोटको तलतलमारा सर्कोस"गै उसलाई एउटा सुखदायी दिनको याद आयो। अहो † क्या अब्बल थियो त्यो दिन † संविधान सभा मारिएको दिन थियो त्यो। त्यो मारि"दा उसलाई मुटुको का"डो झिकेझै" सन्च भएको थियो। बेलुकीपख उसले छतमा उभिएर शहरको चालचोल नियाल्यो। हे, हे, हे † शहरमा मसानघाटको सन्नाटा व्याप्त थियो। म संविधानमा दुनिया"को शानदार भाग्य लेखिदिन्छु भन्दै हावादारी गफ गर्ने गाढा लाल सडकमा थिएन। मलाई छुवाछूतमुक्त जीवन चाहियो भन्दै पाखुरा सुर्किने दलित सडकमा थिएन। मलाई यो र त्यो चाहियो भन्दै अनर्थ दावी गर्ने मधेसे सडकमा थिएन। पहिचानको सम्मान नपाए म हात बा"धेर बस्दिन" भन्दै हुंकार गर्ने मतवाली सडकमा थिएन। विजयोन्मादको मुद्रामा द्रव्यनाथले गम खायो- गजप भयो † धन्य भगवान् श्री पशुपतिनाथ † तिमी छौ र नै मजस्ताको कल्याण सुनिश्चित छ।
द्रव्यनाथले तारे होटलमा भोजको चा"जो मिलायो। भोजमा उसका शिष्ट, सभ्य र सुसंस्कृत कुलीन वर्गबन्धुहरु सामेल भए। द्रव्यनाथ हर्षोन्मादले त्यसैत्यसै फुर्फुर भएको थियो। निम्तालुजनसामु उसले स्यानो मन्तव्य दियो- प्रिय बन्धुगण † आज मेरो जीवनको सबैभन्दा सुन्दर दिन हो। किनभने संविधान सभास"गै संघीयता मर्योय। र, स"गस"गै मर्योद गाढा लालको सत्ता कब्जा गर्ने कुत्सित सपना पनि। पहु"च, प्रतिष्ठा, पहिचान, अवसर आदिजस्ता गन्दे गनगन सुन्नुपर्ने दुर्दिन अब गए। संघीयताको विषाक्त तरबारले काटिएर मुलुक खण्डित हुने खड्गो अबलाई टर्योु। जातीय सद्भावमा आगो लाग्ने खतराले अब नेटो काट्यो। लौ बन्धुगण † सर्वनाशी संविधान सभाको वाञ्छित मृत्युको अपार खुशियालीमा चेयर्स †
दुर्भाग्यवश, द्रव्यनाथको हर्ष धेरै दिन टिकेन। गाढा लालको लाल गर्जन फेरि सुरु भयो। दर्जारहित दलितले फेरि मुख फोर्यो । स्वरमा विखण्डनको हरक आउने मधेसी फेरि कुर्ल्यो। जातीय कलहको ध्वजावाहक मतवाली फेरि जङ्गियो। अनि महिला, सीमान्तकृत र अरु के के हो के केहरु जताततै कराए। यसो सुन्यो, रटना पुरानै छ। उही थोत्रो संविधान सभा। उही थोत्रो सामेली। उही थोत्रो पहिचान। उही बित्थाको अस्मिता र समानता। जेमा पनि बराबरीका उनै थाङ्ने गन्थन। सुन्दै जा"दा द्रव्यनाथको टाउको पट्टै फुट्लाजस्तो भयो। र, ऊ आफ्नै परिभाषाबमोजिमको लोकतन्त्र र मानव अधिकारको ध्वजा बोकेर तुफानी अभियानमा निस्क्यो। उपद्रवी गाढा लाललाई घेरेर, ताछेर, पछारेर र लतारेर पंगु बनाउन। पिता पूर्खाले छाडिगएको गौरवमय परम्पराको बि"डो थाम्न। सनातन धर्म, रीति, विधि र व्यवहारलाई भत्कन नदिन। अखण्ड राष्ट्र र शुद्ध राष्ट्रियताको रक्षा गर्न। समानता र न्यायका नाउ"मा विवेकहीन निचा जीवात्हरुको मनपरी राज हुन नदिन।
द्रव्यनाथ चानचुने मान्छे होइन। दातृनिकायका दाताहरुस"ग उसको भाषा मिल्छ। र नै त सो निकायको द्रव्य उसका लागि आफ्नै धाराको पानीसरह छ। खा"चो पर्दा घै"टो थाप्यो, चाहिएजति थपक्क लियो। कूटनीतिक निकायको द्वार उसका लागि सदैव खुला छ। ऊ त्यहा" जान्छ र भावुक हु"दै गाढा लालको ताण्डवमा परेर लोकतन्त्र र मानव अधिकार खतरामा पर्योा प्रभु, भन्छ। र, चिताएको आशीर्वाद हातलागी गर्छ। 'हेलो' मात्र भने पुग्छ, शीतल निवास र जङ्गी अड्डामा सुटुक्क छिर्न उसलाई रोकटोक छैन। दलित, पीडित र वञ्चितहरु हकका लागि सडकमा ओर्लि"दा टायरहरु बल्छन्, वायुमण्डलमा धुवा" मडारिन्छ, परिवेशमा चित्कार पोखिन्छ। नहोस् भन्दाभन्दै धेरथोर झडप र रक्तपात पनि भइ नै हाल्छ। जब त्यो सब हुन्छ, कोमलाङ्गी सम्भ्रान्तहरुको शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक चैनमा आघात पर्छ। यस्तोमा द्रव्यनाथ साह्रै चिन्तित हुन्छ। अन्यायको मुहान संरचनामा छ, विभेदको कारण संरचनामा छ, विद्रोहको बीज संरचनामा छ। तर बुद्धिशिरोमणिको बुद्धि त्यतातिर जा"दैन। ऊ दातृनिकायको धारोबाट द्रव्य थापेर ल्याउ"छ। र, ऊ शान्ति र सद्भावका नाउ"मा मैनबत्ती बाल्छ, परेवा उडाउ"छ, सेता बर्दीधारीहरुको भव्य जुलुस निकाल्छ। हात चाट्नु त मह काड्नेको हक हु"दै हो। द्रव्यनाथ पनि ल्याप्प चाट्छ। ऊ यदाकदा आफूले चाटेको लित्कोपित्को दुःखीजनलाई अर्पण गर्छ। र, आफ्नै हातले लोकप्रियको पगरी गुथेको छापाले द्रव्यनाथका नाउ"मा सम्पादकीय लेख्छ- अहो † एकबारको जुनीमा मान्छे हुनु त द्रव्यनाथजस्तो पो †
द्रव्यनाथ हप्तैपिच्छे आफू सुहाउ"दो लोकतन्त्र र मानव अधिकारको रक्षार्थ पर्चा लेख्छ। पर्चाको अर्थ र प्रभाव विस्तार गर्न ऊ आफ्नो नामको छाया"मा एकाध फिका लालका नाम ट्याक्क जोड्छ। ती नामको उपयोगिता जब निखि्रन्छ, ऊ तिनलाई दूधमा परेको माखोलाई झै" हुत्त मिल्काउ"छ। एउटा फिका लाल मिल्किन्छ र अर्को फिका लाल द्रव्यनाथको मुर्गा बुन्न हाजिर हुन्छ। अजिङ्गरको अहारा त दैवले जुटाइदिन्छ नै।
द्रव्यनाथको देखिने र चिनिने एनजीओ छैन। तर अधिकांश एनजीओकर्मीहरु उसका कान्छी औ"लाको इसारामा नाच्छन्। द्रव्यनाथ यथास्थितिमुखी बृद्ध पार्टीहरुका उच्च पदमा छैन। तैपनि ऊ ती पार्टीको प्राण पनि हो, त्राण पनि हो। ऊ तिनको आशा हो, ऊ तिनको भरोसा हो। तिनको लोकतन्त्रको परिभाषा गरिदिने ज्ञानी द्रव्यनाथै हो। तिनको मानव अधिकारको अर्थ लगाइदिने विद्वान् द्रव्यनाथै हो। द्रव्यनाथ सभ्रान्त महलको अनिवार्य तŒव हो।
जहा" मानिस जुट्छन्, त्यहा" मूल्यवान् दुई शब्द दिन द्रव्यनाथ पुगिहाल्छ। पुग्दापुग्दै एक दिन ऊ लोकका भोका र नाङ्गा, शोषित र वञ्चित जनको विशाल सभामा पुग्यो। मूल्यवान् दुई शब्दले तिनका बुद्धिका द्वार खोलिदिने उसको मनसुवा थियो। फटाफट मञ्चमा उक्लिन लग्दा स्वयंसेवकले उसलाई रोकेर सोध्यो, 'हजुर कसमा?' 'म बुद्धिशिरोमणि द्रव्यनाथ,' उसले शानका साथ आफ्नो चिनारी खुलायो। 'हजुर यहा" किन?' अर्को प्रश्न आयो। 'मूल्यवान् दुई शब्द दिन,' द्रव्यनाथको उत्तर झर्योा। त्यसपछि द्रव्यनाथसामु श्रमिक जनगणको कोणबाट प्रश्नका वाणहरु छुटे। ज्ञानेन्द्रको फौजी हैकममा रोज्जा मन्त्री पद म पाए खान्छु भन्ने को हो? राजा गद्दीच्यूत हुन लाग्दा 'राजतन्त्र जनताको नासो हो, यसलाई जोगाऔ"' भन्ने को हो? सिंहासन ढल्न लाग्दा 'बेबी किङ बचाइपाऊ"' भन्दै रुने को हो? द्रव्यनाथले सबै प्रश्नको एउटै जबाफ दियो- त्यो म होइन। म त जन्मजात लोकतन्त्रवादी हु"।
तत्पश्चात् एक मङ्कोल मजदूरले प्रश्नको कडा तीर छोड्यो- द्रव्यनाथजी, हजुरले छातीमुनि लुकाएको त्यो के हो? केही छैन, केही छैन- द्रव्यनाथ टक्टकियो। सुनिस्योस् द्रव्यनाथजी- मजदूरले माइकमा छातीमुनिको व्यहोरा पढ्योः
जङ्गली, स्वा"ठे, पाखे, तीघ्रे, भुसतीघ्रे,
डोके, खर्पनेको देश हो नेपाल
भगवान्, यो यस्तै राखिदेऊ।
यिनीहरु सभ्य र शिक्षित भए
हाम्रो सिरिखुरी कहा" जाला?
मन्त्रीमण्डल जोड्दा बाहुन-क्षत्री लिनू
त्यो पनि उच्च कुलको
मतवाली कोही नहुल्नू।
व्यहोरा सकियो र मजदूरले हुंकार गर्यो्- भन् द्रव्यनाथ, तेरो छातीमुनि यो के हो? द्रव्यनाथको होस गुम भयो। कट्टु आर्द बनाउ"दै ऊ थुचुक्क बस्यो। उसका लठैतहरुले उसलाई उद्दार गरी कुदाए। द्रव्यनाथको सुकोमल देहमा कसैले छोएको थिएन। तैपनि भोलिपल्ट द्रव्यनाथको लोकप्रिय छापाले भ"गेरा टाउके अक्षरमा छाप्यो- द्रव्यनाथमाथि गाढा लालका भा"ड लडाकाहरुको सांघातिक आक्रमण। स्वनामधन्य शिरोमणिका शिरमा दश टा"का।
सभार : नागरिक न्युज
Posted by mirein at 12:10 AM
[नहुनु मामा भन्दा कानुमामा जाति]
किरात येले संवतको व्यवहारिक पात्रो निर्माणका लागि ...
सेनालाई मान्छे मार्न लगाउने कांग्रेस-एमाले नै हुन्...
इमानिसंह चेम्जोङका बहुशआयामहरु : प्राञ्य अमर तुम्य...
"लिम्बुवानका गिद्धहरु बाट साबधान"!
गोरे बहादुर खपांगी मगर....